ခါးပေါ်က အဆီပိုတစ်လက်မရဲ့ အန္တရာယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ခါးပေါ်က အဆီပိုတစ်လက်မရဲ့ အန္တရာယ်
Posted by thura.ng2 on Sep 23, 2010 in News | 8 comments
တင်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။.. တကယ်ကို ဗဟုသုတ ရစေပါတယ်…. နောက်နေ့ က စပြီး ဆင်ခြင်မှ.. ဒီနေ့တော့ မဟုတ်သေးဘူး…:D
နာများ စောင်းပြောနေသလိုပဲ ဟီးဟီး .. မြန်မြန် အဆီသွားချမှ … ။
လူတကိုယ်လုံး slim ပါ …. တခါတလေ ခိုးခိုးသောက်လို့သာ …
Several colloquial terms used to refer to central obesity, and to people who have it, refer to beer drinking. However, there is little scientific evidence that beer drinkers are more prone to abdominal obesity, despite it being known colloquially as “beer belly”, “beer gut”, or “beer pot”. One of the few studies conducted on the subject did not find that beer drinkers are more prone to abdominal obesity than nondrinkers or drinkers of wine or spirits.
ဟုတ်လည်း ဟုတ်ပဲနဲ့ … ။ သဂျီးလျှောက်ပြောဒယ် … ။
ရေများများသောက်လျှင်တောင် ဗိုက်ဖောင်းသေးတာပဲ …. ဘီယာသောက်လျှင်လည်း … ဗိုက်တော့ဖောင်းမှာပဲလေ .. ဟုတ်ဘူးလား
သိလား စိတ်ညစ်လိုဆိုပြီး အစားတွေစားရင်းကနေ အခုထိ စားနေတုန်ပဲ …
ဒီပို့စ်ဖတ်လိုက်တာနဲ့ အမေ့ခါးပဲပြေးမြင်မိတယ် ဟိဟိ အမေသိရင်တော့ ခေါင်းခေါက်ဦးမယ်
အမလေး တစ်လက်မလေးတောင် ပိုလို့မရပါလားနော်
အလုပ်မှာက အထိုင်များတော့ ဗိုက်က မပူချင်ပဲပူနေရတာပါ
အစားဆိုလဲ မဖြစ်စလောက်လေးပဲစားတာပါ တကယ့်ကို ဗိုက်က
ဆာမှစားတာပါ ဒါပေမယ့် အချိန်တိုင်း ဗိုက်ကဆာနေတော့ ခက်သား ဟီး
၁လက်မ တက်မှ ၃ရာခိုင်နှုန်း ၊ ၁၀လက်မမှ ၃၀ရာခိုင်နှုန်း ??